China Plastic Wall formwork mveliso kunye nabathengisi | Lianggong
Ifomathi yodonga lweLianggong yePlastikhi yinkqubo entsha yefomathi eyenziwe nge-ABS nakwiglasi yefayibha. Inika iisayithi zeprojekthi ngolwakhiwo olulula kunye neepaneli zobunzima bokukhanya ke kulula kakhulu ukuziphatha. Ikonga iindleko zakho xa kuthelekiswa nezinye iinkqubo zefomathi yezinto eziphathekayo.
Ifomathi yeplastiki yinkqubo entsha yefomwork eyenziwe nge-ABS kunye neglasi yefayibha. Inika iisayithi zeprojekthi ngolwakhiwo olulula kunye neepaneli zobunzima bokukhanya ke kulula kakhulu ukuziphatha.
Iplastikhi yefomwork ngokucacileyo iyayiphucula indlela eyiyo yokwenziwa kweendonga, iikholamu kunye neeslabs zisebenzisa ubuncinci benani lezinto ezahlukeneyo zenkqubo yeefom.
Ngenxa yolungelelwaniso oluchanekileyo lwesahlulo ngasinye senkqubo, ukuvuza kwamanzi okanye ikhonkrithi esandula ukugalelwa evela kwiindawo ezahlukeneyo kuthintelwe. Ukongeza, yeyona nkqubo igcina abasebenzi kuba akukho lula ukufaka nokufaka, kodwa nobunzima bokukhanya xa kuthelekiswa nezinye iinkqubo zefomwork.
Ezinye izinto zokwenziwa (ezinjengomthi, intsimbi, ialuminium) ziya kuba nezinto ezingalunganga ezahlukeneyo, ezinokuthi zigqithe kwizibonelelo zazo. Umzekelo, ukusetyenziswa kweenkuni kuyabiza kwaye kunefuthe elikhulu kwindalo esingqongileyo ngenxa yokugawulwa kwamahlathi. Ikonga iindleko zakho xa kuthelekiswa nezinye iinkqubo zefomwork.
Ngaphandle kwezinto, ababhekisi phambili bethu bagxile ekuqinisekiseni ukuba inkqubo yeefom kwakulula ukuyiphatha nokuyiqonda kubasebenzisi. Nokuba ngabaqhubi abanamava beenkqubo zefomwork bayakwazi ukusebenza ngefomathi yeplastiki ngokufanelekileyo.
Iplastikhi yefomathi inokurisayikilisheka, ukongeza ekunciphiseni ixesha lokuqhubekeka kunye nokuphucula izikhombisi ezinokuphinda zisebenze, ikwayinto efanelekileyo nokusingqongileyo.
Ukongeza, itemplate yeplastiki inokuhlanjwa ngokulula ngamanzi emva kokusetyenziswa. Ukuba yaphuka ngenxa yokuphatha ngendlela engafanelekanga, inokutywinwa ngompu womoya oshushu ophantsi.
Igama leemveliso Ifomathi yePlastikhi yoDonga
Ubungakanani obuqhelekileyo Iiphaneli: 600 * 1800mm, 500 * 1800mm, 600 * 1200mm, 1200 * 1500mm, 550 * 600mm, 500 * 600mm, 25mm * 600mm njl.
Izixhobo Ukutshixa izibambo, ukubopha intonga, ukubopha intonga yamandongomane, ukuqinisa okungqinelanayo, ipropu ehlengahlengiswayo, njl.
Iinkonzo Sinokubonelela ngesicwangciso esifanelekileyo seendleko kunye nesicwangciso sokuyilwa ngokokuzoba kobume bakho!
* Ukufakwa ngokulula kunye nokudibanisa ngokulula.
* Yahlulwe ngokulula kwikhonkrithi, akukho mfuneko yokukhupha iarhente.
* Ubunzima bokukhanya kunye nokukhuseleka ukuphatha, ukucoca ngokulula kunye nokuqina kakhulu.
* Ifomathi yePlastiki inokuphinda isetyenziswe iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde isetyenziswe ngaphezulu
* Ngaba unokuthwala uxinzelelo lwekhonkrithi olutsha ukuya kuthi ga kwi-60KN / sqm ngokuqiniswa okufanelekileyo
* Sinokukunika inkxaso yenkxaso yobunjineli besiza.
Egqithileyo I-H20 Timber Beam Column Formwork
Okulandelayo: Inkcitho yeRinglock
Ifomathi yeplastiki yeeNdonga eziPhathekayo
Ifom yeplastiki enokuphinda isebenze
Uluhlu lweKholamu engqukuva